အဘယ်အရာကိုဒုက္ခသည်အဆင့်အတန်းများအတွက်အတန်းအင်တာနက်ပေါ်ရှိဖြစ်ကြပြီးအဘယ်ကြောင့်အခမဲ့ပါသလဲ | USAHello | USAHello
إذا أخبرك أي موقع الكتروني يعطيك شهادةGED® أو الجنسية الأمريكية ، فهذا ليس صحيحًا. ဒါဟာမကောင်းတဲ့တည်နေရာင်. သူတို့ကိုပိုက်ဆံသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုမပေးပါဘူး.
စမ်းသပ်မှုများတွင်လိမ်လည်မှုကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပါ – معلومات من خدمة اختبار GED®
အတု site ကို detect လုပ်ဖို့ဘယ်လို
လက်မှတ်များနှင့်အကြံပြုချက်များ – ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေအချို့တို့သည်စာသင် RCO အကြောင်းကိုပြောပါအဘယျသို့
“أنا سعيد للغاية بالوصول إلى موارد مثل مركز اللاجئين لمساعدتي في الدراسة من أجل GED® الخاص بي.” – Saint Fathiah
“لقد أخذت مراجعة GED® لمركز اللاجئين لمساعدتي في اجتياز اختبار GED® في كاليفورنيا. لقد اجتزت اختبار GED® لجميع المواضيع في المحاولات الأولى. သငျသညျစိတျနှလုံးအသံသရာစောင့်ကြည့်နိုင်မှတ်ပုံတင်ရေးအတွက်ပညာရှင်များ. ယခုငါကောလိပ်ကျောင်းမှာသင်တန်းများအတွက်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုပူဇော်. “- နစ်ခ် Asquibl